Tag: DHUUSA | Sagal Radio Services
Hoggaamiyaha Mucaaradka ee Xisbiga Wadajir C/raxmaan C/shakuur Warsame ayaa si weyn uga hor-yimid baaqii ka soo yeeray dowladda Qatar ee ay dhowaan u jeedisay dhinacyada isku haaya siyaasadda Soomaaliya.
Musharaxa Madaxweynaha Maamul Goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa gaaray magaalada Dhuusamareeb ee xarunta Maamul Goboleedka Galmudug ee Dhuusamareeb.
Wararkii ugu dambeeyey ee magaalada Dhuusamareeb
Sagal Radio Services • News Report • August 30, 2019
Wararka laga helayo Magalada Dhuusamareeb ee Xarunta Gobolka Galgaduud ayaa waxaa ay sheegayaan in goordhow garoonka diyaaradaha magaaladaas ay ka degatay diyaarad siday Ciidamo Boolis ah.
Ahlu Sunna oo sheegtay in dowladda federaalka ku soo duushay una diyaar-garoobeen dagaal
Sagal Radio Services • News Report • August 27, 2019
Qoraal goor dhaw ka soo baxay hoggaanka sare ee Ururka Ahlu Sunna Waljameeca ayaa lagu sheegay in dowladda federaalka ku soo duushay deegaannada maamulka Ahlu Sunna Waljameeca.
Ciidamo dheeraad ah ayaa saaka ka degay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta Galmudug, kuwaasoo diyaarado looga qaaday magaalada Muqdisho.
Ciidamada laga dejiyay Dhuusamareeb oo la wareegay Xarumo muhiim ah iyo RW Kheyre oo ku sii jeeda
Ciidamo cusub oo dowladda Federaalka ka dejisay magaalada Dhuusamareeb ayaa la wareegay xarumo muhiim ah, iyadoo ciidamadan ay yihiin Booliska gaarka u tababaran ee loo yaqaano Haramacad, kuwaasoo saakay diyaarado looga qaaday magaalada Muqdisho.
Sagal Radio Services • News Report • August 20, 2019
Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir C/raxmaan C/shakuur Warsame ayaa ka hadlay dadaalada la doonayo dhismaha dowlad goboleedka Galmudug oo ay hormuud ka tahay Xukuumadda Federaalka, isagoo ka digay in la dhiso maamul maqaar saar ah oo olole siyaasadeed lagu gaaro doorashada 2020/21.
Faahfaahin ka soo baxaysa dagaal caawa ka dhacay Dhuusamareeb
Sagal Radio Services • News Report • August 17, 2019
Waxaa soo baxaya faahfaahin ku saabsan iskahorimaad hubeysan oo caawa ku dhex maray magaalada Dhuusamareeb ciidamada nabadsugida iyo ciidamada Booliska magaalada Dhuusamareeb.
Ra’iisul Wasaare Kheyre oo la kulmay Wakiilo ka socda Beesha Caalamka
Sagal Radio Services • News Report • July 22, 2019
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa magaalada Dhuusamareeb kula kulmay safiirrada dowladaha saaxiibka la ah Soomaaliya ee saldhiggoodu yahay magaalada Muqdisho iyo wakiilladaha hey’adaha caalamiga ah oo maanta magaalada soo gaaray.
RW Kheyre “La iskuma heysto in Dhuusamareeb ay tahay Magaalo madaxda Galmudug, waxaa la isku heystaa…
Sagal Radio Services • News Report • July 18, 2019
Ra’iisul Wasaare Kheyre “Mowqifka dowladda waa in la dhamaystiraa Hey’adaha dowladeed ee Galmudug”
Sagal Radio Services • News Report • June 26, 2019
Ra’iisul Wasaaraha Soonaaliya Xasan Cali Kheyre oo galabta meel fagaara ah kula hadlay bulshada magaalada Cadaado ayaa sheegay in Dowladda Federaalka ay ka go’an tahay in la dhammeystiro hay’adaha dowladeed ee maamulka Galmudug.
Wariyihii Maxkamadda ciidan ay xukuntay oo xoriyaddiisa dib u helay
Waxaa xalay la sii daayay Wariye Maxamed C/weli Tooxow oo shalay Maxkamad ciidan ay ku xukuntay lix bilood oo xabsi ah, kaddib markii lagu eedeeyay inuu baahiyay warar ka dhan ah Maamulka Galmudug.
Sagal Radio Services • News Report • September 15, 2018
Qeybo ka mid ah Gobolka Galgaduud oo saaka maalinta koowaad laga ciidayo
Sagal Radio Services • News Report • August 22, 2018
Qeybo ka mid ah Gobolka Galgaduud ayaa maanta oo Arbaco ah laga ciidayaa maalintii koowaad ee Ciidul Adxa, xilli maalintii shalay Gobolada dalka Soomaaliya iyo dalalka Muslimiinta laga ciiday maalintii koowaad.
Sagal Radio Services • News Report • May 27, 2018
Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo goor dhow shir jaraa’id ku qabtay magaalada Dhuusamareeb ayaa uga digay dowladda Federaalka inay farageliso arrimaha Galmudug.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka SoomaaliyaMaxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ugu baaqay bulshada deegannada Galmudug in ay kaalintooda ka qaataan dhaqan gelinta heshiiska mideynta Galmudug.
Ciidamadii Ilaalada Madaxweynaha oo loo ogolaaday inay galaan Dhuusamareeb
Warar goor dhow na soo gaaray ayaa sheegaya in Ciidamo Ilaalada Madaxweyne Farmaajo oo saaka lagu hor-istaagay agagaarka deegaanka Mareergur oo bar koontarool ay ku leeyihiin Ahlusuna ayaa loo ogolaaday inay galaan Dhuusa Mareeb.
Madaxda dowlad goboleedyada oo ku sii jeeda magaalada Dhuusamareeb
Madaxda maamul goboleedyada dalka ayaa ku wajahan magaalada Dhuusamareeb ee Gobolka Galgaduud, iyagoo ka qeyb galaya shirka lagu mideynayo Maamulka Ahlusuna iyo Galmudug, kuwaasoo dhamaadkii sanadkii hore heshiis awood qeybsi ku gaaray dalka Jabuuti.